nepaldoor.com: कान्छीमाया मगर्नीको ‘अपरेसन’ कथा
अपरेसनपछि चिकित्सकहरुका साथमा कान्छीमाया ।
बरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयदले मंसिरको शुरुवातमै मलाई सूचना दिएका थिए– हामी एउटा जटिल केसको अपरेसन गर्दैर्छौैँ । सक्सेस भयो भने खबर गरौँला । तपाईँका लागि एउटा स्टोरी हुनसक्छ ।’
‘समाचार’को कृषकलाई यो भन्दा अरु के चाहियो र । भनिदिएँ, ‘हुन्छ, खबर गर्नुहोला ।’
यो बीचमा संविधानसभाको निर्वाचन सकियो । मतगणना सम्पन्न भयो । त्यही पनि दिमागमा राजनीतिक समाचारको ह्याङ्ओभर बाँकी थियो ।
१५ मंसिरमा डा. सैयदको फोन आयो, ‘१२ गते नै अपरेसन सक्सेस भयो । बिरामी मनमोहन अस्पतालमा आराम गर्दैछन् । समय मिलाएर आउनुप¥यो ।’
भोलिपल्ट मध्यान्ततिर स्वयम्भुस्थित अस्पताल पुगेँ । कलंकीबाटै डा. सैयदले मलाई रिसिभ गरे ।
कान्छीमायमा महर्जन बेडमा थिइन् । पोष्ट अपरेसन (अपरेसनपछि)को अवस्था । तर उनी चंगा थिइन् । साथमा समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठलाई देखेपछि थप कौतुहलता जाग्यो । चिनजान भयो ।
डाक्टर साहेबले भने, ‘उहाँकै पेटबाट हामीले तीस बाई तीस सेन्टिमिटर साईजको करिब ९ केजी ट्युमर फालेका हौँ ।’ कान्छीमाया मुसुक्क हाँसिन् । भनिन्, ‘उहाँ (डा. सैयद) नै मेरा भगवान् हुन् । उनैले मलाई बचाए ।’
‘म भगवान होइन आमा’ सैयदले जबाफ फर्काए, ‘यो त मेरो कर्तव्य हो । डाक्टर भगवान हुँदैन ।’
दिलशोभाले थपिन्, ‘यो उहाँ (सैयद)कै कारण सम्भव भएको हो । उहाँ र साथीहरुले ठूलो गुन लगाउनुभएको छ । मेरा लागि पनि उहाँहरु भगवान ।’
डा.सैयदले शिष्ट भाषामा थपे, ‘यो मेरो चिकित्सकीय ड्युटी । अरु केही होइन ।’
मलाई जान्नुथियो–कान्छीमायाको अपरेसन कथा । ‘आमाघर’की दिलशोभा दिदी र डा. सैयद अस्पतालको भुईँतल्लाको एउटा सफा कोठामा बस्यौँ । अनि शुरु भयो कान्छीमायाको कहानी ।
बेसहारा जीवन । कान्छीमायाको पेटभित्र डिम्बासयमा पलाएको ट्युमर बढ्दै थियो । सास फेर्न गाह्रो हुँदै गयो । ट्युमर बढेर ९ केजी पुगेको थियो । उपचारको टुंगो थिएन । छ बर्षदेखि ‘आमा घर’मा उनलाई बस्न सहज थियो । तर ट्युमर बढेको उपचार कसरी गर्ने ?
दिलशोभाको पछि लागेर कान्छीमाया काठमाडौंका नामी अस्पताल धाउँदै थिइन् । तर डाक्टरहरू उनलाई पन्छाउँदै थिए । वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल हुँदै बाँच्ने अन्तिम कसरतका लागि उनी भरतपुर क्यान्सर अस्पताल जाने तरखरमा थिइन् । सबै कुराको बन्दोबस्त हुँदैथियो । मंसिर १ गते । मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालका प्रशासक चिरञ्जीवि चुडालले दिलशोभाको आमा घरमा फोन गरे । गाडी पठाइदिए । त्यसपछि दिलशोभाले कान्छीमायालाई अस्पताल लगिन् ।
कान्छीमायाको चेकअप सुरु भयो । डाक्टरहरुले पाटन अस्पतालमा गरेको सिटी स्क्यानको रिपोर्ट, वीर र भक्तपुर अस्पतालका सबै विवरण हेरे ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले भने, ‘कान्छीमायाको अपरेसन यहीँ हुन्छ । काहिँ जानुपर्दैन ।’ उपत्यकाका अनेक अस्पताल धाएको पीडाबाट छुटकारा मिल्यो । ‘अभिभावक’ दिलशोभा खुशीले गदगद भइन् । कान्छीमाया पनि मुस्कुराइन् । खुशीको अर्को पनि कुरा थियो– उपचार खर्च नलिने अस्पतालको निर्णय ।’
फुर्तिली कान्छीमाया (बीचमा) साथमा डा. सैयद र दिलशोभा
कान्छीमाया १० मंसिरमा अस्पताल भर्ना भइन् । पर्सिपल्ट १२ मंसिरमा उनको अपरेसन भयो । विशेषज्ञ डा. अन्जु श्रेष्ठ, डा. मनोर दिन सैयद, डा. उमाकान्त भट्टराई, डा. समी मानन्धरको टोलीले अढाई घण्टा लगाएर अपरेसन गरे ।
‘कसैले जिम्मा लिएका रहेनछन्, हामीले जिम्मा लिएर सफलतापूर्वक अपरेसन ग¥यौँ,’ डा. सैयदले भने ।
अस्पतालले खाने, बस्ने सबै खर्च बेहोरिदियो । निजि अस्पतालमा करिब १ लाख रुपियाँ भन्दा कमले यो रोगको उपचार सम्भव छैन । बेसहारा कान्छीमायाका लागि एक लाख रुपियाँको उपचार सम्भव थिएन । तर उनको भाग्य बलियो रहेछ ।
कान्छीमाया यो पंक्ति तयार गर्दासम्म अस्पतालमा आराम गरिरहेकी छिन् ।
शुरुमा कान्छीमायालाई तनाबको अवस्थामा देखेका डा.सैयद यतिबेला खुशी छन् । ‘शुरुमा भेट्दा उहाँ सोझो बस्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो, श्वास फेर्न निकै गाह्रो भएको थियो’ डा. सैयदको अनुभव छ, ‘अहिले उहाँलाई हेर्दा लाग्छ, केही भएकै छैन । कहिलेकाहिँ त उहाँ आफैँ पनि बिरामी होइन कि जस्तो गर्नुहुन्छ ।’
समाजसेवी दिलशोभाको त खुशीको सीमा नै छैन ।
कान्छीमायाको चेकजाँच गदै डा. मनोर दिन सैयद
कान्छीमायाको जीवनकथा पीडादायी छ । जन्म काठमाडौंमै भयो । काठमाडौंमै सडक विभागमा काम गर्ने मान्छेसँग विहावारी । ६ बर्ष अघि श्रीमान परलोक भए । त्यसपछि एक्लै कालीमाटीतिर भौँतारिएकी उनले आमा घरमा प्रवेश पाइन् ।
‘मेरो घर कहाँ हो केही थाहा छैन, कालीमाटीमै बसेँ, यहीँ बिहे गरे, श्रीमान्को मृत्यु भयो, अहिले कोही छैन,’ कान्छीमायाले भनिन्, ‘दिलशोभा आमाबाट आफ्नै आमाको भन्दा धेरै माया पाएँ । अहिले भगवानजस्ता डाक्टरबाट यत्रो उपचार ।’
कान्छीमाया भावुक थिइन् । खुशीले दिलशोभाका आँखा रसाइरहेका थिए ।
Anonymous6December 2013 at 20:06
ati marmik real katha
thanks for making positive news for the community
Anonymous7December 2013 at 18:14
sadhai rajniti kura sunda wakka bhayiyo, aba yesto sakaratmak samachar sunna pauda khusi lagyo. nisha sharma
janak 12 December 2013 at 08:25
sandarbhik tatha manabiyeta ko uttam udharan.....
ramila sundas 12 December 2013 at 18:04
many many likes for Dr.Sb and patrakar jiu
Unknown 12 November 2014 at 23:49